Jay-Jay Okocha sirta gambiskiisii sixirka ahaa, sidii uu wax u baray Ronaldinho, buracadda halista badnaa ee dalkiisa & Xogo kale oo qosol badan – Gool FM
(Yurub) 08 Sebt 2019. Dunida kubadda cagta waxaa soo maray xiddigo aad u badan kuwaas oo mid walba oo ka mid ah xiddigahaasi lagu xusuusto dhaqmo u gooni ah, balse xiddiga aynu haatan ka hadli doonnaa waa halyeyga iyo mucjisadii qaaradda Afrika ee Jay-Jay Okocha.
Waxaa lagu tilmaa Aabihii gambiska dhanka kubada cagta marka loo eego xirfaddiisii dhanka ciyaaraha, si kale haddii loo dhahana waa macallinkii kubadda ee caawiyey Ronaldinho, bal sawiro macallinkii soo garab qabtay xiddigii dunida kubadda cagta waalay ee RONALDINHO !.
Waxa aynu warbixintaan ku eegi doonnaa jawaabo badan oo uu bixiyay halyeeyga qarada Afrika ee Jay Jay Okocha, waxaana ka mid ah su’aalaha uu ka jawaabay, sirta gambiskiisii faraha badnaa markii uu xiddiga ahaa, qaabkii uu wax u baray Ronadinho iyo goobtii ay ku kulmeen, burcadda halista badan ee waddankiisa iyo qaabkii uu kaga gudbay cunsuriyaddii lagula kacay intii uu ku sugnaa waddanka Jarmalka iyo su’aalo kale.
Fadlan haddii aad rabto in aad wax badan ka ogaato sheekadan qosolka badan iyo waliba tariikhda xiddigan Jay Jay iyo xogihiisa oo kooban fadlan inala daawo muqaalkan hoose.
Halkaan hoose ka aado Wareysigii uu bixiyey Jay-Jay oo afka Ingiriiska ah:-